Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: टालमटोल -> Mmehie
1 KỌRINT १४:४०
पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं।
Ma Jisọs nyere onwe ya dị ka aja nanị otu ugboro. Aja o ji onwe ya chụọ dịkwa ire ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe o mesịrị ọ gara nọdụ ala nꞌaka nri Chineke.
“Jikerenụ, yirinụ uwe ọgụ unu, buliekwanụ iheọkụ unu.
Unu kwesịrị ịnọ na njikere mgbe nile nꞌihi na Nwa nke mmedụ ga-abịa nꞌoge unu na-adịghị ele anya ya.”
 Eziokwu pụtara ìhè bụ nke a, ọ bụrụ na m na-anọgide na-eme ihe ọjọọ m kpọrọ asị, ọ dịkwaghị otu ọzọ a ga-esi kọwaa omume a, karịakwa na mmehie ahụ dị nꞌime m, eriela m ahụ, mee ka m na-eme nanị ihe ọ chọrọ. Nꞌihi na ahụla m ya na ndụ m, na tupuu m cheta echiche ime ihe dị mma, echiche ọjọọ eburularị ụzọ were oche nꞌime m.
 Jisọs gwara onye ọzọ bịakwutere ya sị, “Soro m.” Ma nwoke ahụ zara sị, “Biko, nyenụ m ohere ka m gaa buru ụzọ lie nna m.” Ma Jisọs zara ya sị, “Hapụ ndị nwụrụ anwụ nꞌime mmụọ ha ka ha lie ndị dị ka ha. Ọrụ gị bụ ịga gbasaa ozi ọma nke alaeze Chineke.” Onye ọzọ kwa bịakwutere Jisọs sị ya, “Aga m esoro gị, ma biko kwere ka m gaa gwa ndị ezinụlọ m na m na-ahapụ ha.” Jisọs zara ya sị, “Onye ọ bụla ji ọgụ ya malite ịrụ ọrụ nꞌubi, mesịa hapụ ọrụ ọ na-arụ lewe anya nꞌazụ, ekwesịghị ịba nꞌalaeze Chineke.”